भारतिय काग्रेसले भन्यो नेपालसंग भएको के हो ? मोदी सरकार नेपालंगको सदियो देखिको सम्बन्ध बि गा र्न लागेको गान्धीको टि,प्पणी - Filmy News Portal Of Nepal
यतिबेला नेपाल भारतको सीमा बि वा द उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारी स्तरबाट खासै कुराकानी नभएपनि नागरिक र मिडिया एकअर्का बि,,रुद्ध लागि रहेको देखिन्छ । यहीबीच कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले नेपाल र चीनसँगको सम्बन्धमा आएको द..रारका विषयमा भारत सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीका क्रममा कांग्रेस नेता गान्धीले भारत सरकारले पछिल्ला दिनमा देखिएको नेपाल र चीनसँगको दरारका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् । कोरोना भाइरसको महामारीकै समयमा मंगलबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा जारी तनावका विषयमा सरकारलाई विभिन्न प्रकारका प्रश्न सोधेका छन् ।
उनीे भन्छन, ‘सत्य के हो ? सरकारले राष्ट्रलाई जानकारी गराउनु पर्छ । सीमा क्षेत्रमा भइरहेका सबै गतिविधिहरुका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व हो ।’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेताहरु नेपालविरुद्ध उभिँदा विपक्षी कांग्रेसले भने सम्बन्ध बिगारेको भन्दै सत्तारुढ भाजपाको आलोचना गरेको छ । गान्धी भन्छन्, ‘नेपालसँग के भएको हो ? लद्दाख क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? सरकारले प्रष्ट जानकारी दिनुपर्छ । सरकार पारदर्शी बन्नुपर्छ ।’
भारतले नेपाली भुमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि नेपालमा त्यसको चर्को वि,,रोध भइरहेको छ । नेपाल सरकारले भारतको कब्जामा रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
नेपालको नयाँ नक्साप्रति भारतले अ,,सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यस्तै पछिल्लो केही दिनयता भारत र चीनबीचको सीमा वि वा द पनि सतहमा आएको छ । लद्दाखमा चिनियाँ सेना आफ्नो भुमिमा प्रवेश गरेको भारतले आरोप लगाएको छ । एजेन्सी ।